Monetizer - သင်၏ Remnant၊ Geo-redirect သို့မဟုတ် Exit Traffic | Martech Zone
Monetizer: သင်၏ Remnant, Geo-redirect or Exit Traffic ကိုငွေရှာပါ
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 25, 2016 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2017 Douglas Karr
မယုံပါနဲ့၊ သင့်ဆိုဒ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းသည် မဟုတ် အလားအလာ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတတိယပါတီမှကြော်ငြာများဖြင့်ငွေသွင်းပြီးပါကထိုကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများသည်ကျန်းမာရန်နှင့်ကြော်ငြာများကိုသက်ဆိုင်ရာ visitors ည့်သည်များအားပြရန်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများလိုအပ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိဆွဲဆောင်မှုနှင့်တည်နေရာအရေအတွက်ကိုသင်၏ကြော်ငြာဟုလူသိများသည် စာရင်း.
Remnant Traffic ဆိုတာဘာလဲ။
၀ ယ်ထားသောကြော်ငြာများသည်အဓိကပစ်မှတ်ထားသောကြောင့် targeted ည့်သည်များကျန်ရှိနေသေးသောအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကော။ ၎င်းအသွားအလာကိုအကြွင်းအကျန်အသွားအလာအဖြစ်လူသိများသည်။ ကျန်ရှိသောအသွားအလာသည်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသူများအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့အွန်လိုင်းကြော်ငြာစျေးကွက်တွင်ကြေညာသူများ၊ ကြော်ငြာသူများနှင့်ကြော်ငြာကွန်ယက်များသည်များစွာသောသူတို့သည်မိုဘိုင်းနှင့်ဝက်ဘ်အသွားအလာကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုကြပါ။ ထို့အပြင်ပစ်မှတ်မထားသည့်နိုင်ငံများမှ visitors ည့်သည်များသည်လုံးဝကိုစွန့်ပစ်သွားနိုင်သည်။
မအောင်မြင်သော၊ ထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်အကြွင်းအကျန်အသွားအလာကိုငွေရှာရန်ကြိုးစားသည့်အခါအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်နှင့်ထောင့်တိုင်းကိုဖြေရှင်းရန်အတော်လေးခက်ခဲသွားသောကြောင့် Monetizer သည်ပြbestနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးသောအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ထားသောအစီအစဉ်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံ ကြေညာသူများသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်အသွားအလာကိုငွေရှာရန်အတွက်သီးသန့်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါစနစ်ကတ ဦး တည်းကိုအသုံးချ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်လင့်ခ်။ သူတို့ရဲ့စီးပွားဖြစ်စက်သင်ယူမှု ချစ်သူ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ထူးခြားသော eCPCs (တိုးမြှင့်မှုနှုန်း - ကလစ်တစ်ချက်) ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် algorithm သည် factors ည့်သည်များ၏တည်နေရာ၊ လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အခြားအချက်များနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းသည်ထူးခြားသောရလဒ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ မိတ်ဖက်များစွာသည်ယာဉ်ကြောမှမဟုတ်သောသွားလာမှုကြောင့်သွားလာမှုမှနေ့စဉ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ၀ င်ငွေရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းနောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးအသစ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Monetizer နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အနာဂတ်မည်သို့ရှိမည်ကိုမြင်တွေ့ရသောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ Max Tetrault, Managing Partner၊ ပိုက်ဆံ
ပိုက်ဆံ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှတစ်နေ့လျှင်သန်းပေါင်း ၁၂၀ ထိနှိပ်ခြင်းနှင့်တစ်လလျှင် ၃ ဘီလီယံထိနှိပ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနေသည်။ သူတို့သည်မိုဘိုင်းနှင့်ဝဘ် (အဓိကနှင့်လူကြီးအသွားအလာ) နှစ်ခုလုံးကိုငွေရှာနိုင်ကြသည်။ သူတို့၏ Global Smart Link သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များထံမှရရှိသော ၀ င်ငွေများ၏အပတ်စဉ်ပေးချေမှုများနှင့်အတူ Monetizer partner interface သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီစာရင်းဇယားများနှင့်အစီရင်ခံခြင်းများပြုလုပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ Monetizer ကိုစဖွင့်တုန်းကအရမ်းအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ကရုန်းကန်ခဲ့ဖူးတဲ့ယာဉ်အသွားအလာကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့်ပါ။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာ Bert Xia ဟုတ်တယ်နော်
Monetizer အဘို့အ sign up ကို
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: Monetizer သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေသည်။
Tags: ကြော်ငြာစာရင်းကြော်ငြာစာရင်းBert xiaecpcတိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ် -per- ကလစ်နှိပ်ပါmax ကို tetraultပိုက်ဆံအကြွင်းအကျန်အသွားအလာအကြွင်းအကျန်အသွားအလာကဘာလဲဟုတ်တယ်
CoffeeSender: Starbucks လက်ဆောင်ကဒ်ကိုကလစ်တစ်ချက်ဖြင့်ပို့ပါ
သြဂုတ် 26, 2016 မှာ 6: 07 AM
အကြွင်းအကျန်အသွားအလာကို အာရုံစိုက်နည်း ဆောင်းပါးကောင်း။ စမ်းကြည့်မယ် !!